Indlela yeholide eyaziwayo yamaXesha onke: iAntalya | RayHaber | raillynews
[20 / 02 / 2020] Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu İle İzmir’den Çandarlı Arası 40 Dakika Sürecek	35 Izmir
[20 / 02 / 2020] Afyonkarahisar Inqwelana yeCable Car Tender Okokugqibela	03 Afyonkarahisar
[20 / 02 / 2020] I-Babayiğit ifunwa ngeProjekthi yeCry yeKartepe yeKartepe	41 Kocaeli
[20 / 02 / 2020] Ingxowa-mali yobutyebi ayikho kuluhlu lwethu lwe-Istanbul Investment Uluhlu	34 Istanbul
ikhayaETURKEYCoast yaseMedithera yaseMedithera07 AntalyaIndlela yeholide eyaziwayo yamaXesha onke: IAntalya
28 / 01 / 2020 07 Antalya, Coast yaseMedithera yaseMedithera, JIKELELE, Ileta yokwazisa, ETURKEY
Indlela yeholide ethandwayo ngalo lonke ixesha lokuhamba kweekati
IAntalya, yenye yezona ndawo zihamba rhoqo kubakhenkethi, apho iiholide zinganikezeliyo, zinika ukhetho oluninzi kubathandi bokuhamba. Iilwandle zineelwandle ezidumileyo, iihotele ezinqabileyo, iiparadesi kunye namakhulu ezixeko zakudala, iAntalya yenye yeendawo abakhenkethi bebetha ipulse minyaka le kwaye babamba amawaka abakhenkethi basekhaya nabangaphandle.
IAntalya, lelinye lamaziko okhenketho abaluleke kakhulu emhlabeni anobuhle bendalo, iindawo zembali kunye neelwandle, ahlala abantu abaninzi benxweme olukhulu ukusuka eGazipaşa ukuya eKaş. IAntalya inembali yokubamba phantse abakhenkethi bamakhaya abangama-9 amawaka ukongeza kwisigidi esinye sabakhenkethi bangaphandle minyaka le ngexesha leentsuku ezili-1 ze-Eid al-Adha.
Ukhenketho lwedolophu lubonakala kwizixeko zeAlanya, Side kunye neendawo ezingqongileyo kwimpuma, iBoğazkent, Belek, Konyaaltı, Beldibi, Kaş, entshona. Ngamabhishi angenakubalwa kunye neparadesi yodonga, iidolophu zembali zakudala, ezona hotele zinobunkunkqele, iindawo ezinamanzi, imiqolomba, iicanyon kunye nezinye iindawo zendalo, iAntalya iyaqhubeka ukuba sesona sixeko siyithandayo.
Abo bafuna ukuya e-Antalya banokufumana izibonelelo kumathuba anikezelwa yivenkile yeholide. Ihotele zaseLondonIkhululekile kakhulu kwaye ikumgangatho ophezulu.
Eyona ndawo idume ngokuAntalya
IAntalya, sesinye sezona zixeko zidumileyo kuMmandla weMeditera, sesinye sezixeko ezikhethiweyo nezithandwayo hayi iTurkey kuphela kodwa ngabantu baseRussia, amaJamani kunye neBritane. IAntalya, ethe yasinda ngokushiya imisebenzi emininzi kumaxesha e-prehistoric, yidolophu eyabamba impucuko ezininzi ngokubhekisele kwindawo yayo.
Ibibambe abantu baseLydia, amaHeti, amaRoma, amaByzantines, amaBergamian, amaSeljuks kunye namaOttoman anembali nenkcubeko yawo. Country edibana inxalenye enkulu ukhenketho Antalya, iphakathi komzi kunezizwana eTurkey. Isixeko, esinezithili ezili-19 kunye needolophu ezingama-73 zizonke, zineelali ezingama-537.
Umsebenzi wokhenketho wenziwa kuyo yonke indawo. IAntalya, ephambili kwindawo yemidlalo yamazwe aphesheya, iphakathi kwezona zixeko zibalulekileyo nezembali nenkcubeko yazo, nangona iseyona ndawo iphambili kugxile kukhenketho lweholide. E-Antalya, ungathatha iifoto ezintle ukusuka kulwandle lwe-azure, iintaba ezenziwe ngxi kunye namafu emi ngxi encotsheni yeentaba.
Iindawo zokundwendwela eAntalya Antalya, esembindini nezinto zayo zakudala kunye nobuhle bayo bendalo kunye nolwandle, lityelelwa ziindawo ezinamanzi kunye nemiqolomba. Ngombulelo kwiVeki yeHolide, ungafika kwesi sixeko sihle kwaye uthathe amathuba amahle.
Kwiholide Isixeko Belek
Xa ehlotyeni ekutsaleni omnye kakhulu ethandwa abakhenkethi iiholide Turkey ngayo Belek emi kuyo. Nangona iAntalya ingummelwane, lo mmandla uye waziwa kakhulu, uneehotele ezahlukeneyo kunye neendawo zokuhlala.
Ihotele eBelek Ngesi sizathu, ingingqi enomdla kubakhenkethi minyaka le. Inyani yokuba amanzi ayo acocekile, iilwandle zayo zicocekile kwaye zintle, kwaye zisingatha iindawo ezininzi zembali zinceda iBelek ukuba ityelele ngokwabantu abathanda ukuhamba.
Ngokudala isikhokelo esihle sokuhamba kubo, kunokwenzeka ukuba ungandwendwela hayi kuphela iilwandle kodwa kunye nendawo zendalo kunye nezembali ngexesha elifutshane.
IBelek, ngakumbi ehlotyeni, inomdla ngakumbi kubakhenkethi kwaye iphindwe kabini inani labemi bayo xa kuthelekiswa nezixeko ezijikelezileyo.
Kuya kwanela ukwenza ukubhuka ngokukhawuleza ngexesha elifutshane ukuze uthathe ithuba lomgangatho ogqwesileyo kunye nolona lonwabo lubonakalayo.
Ithiyetha yeAntique esecaleni
Le ithiyetha yakudala, ekufuphi neBelek, yenye yeendawo ezinokubonwa. Kule thethiyetha yakhiwe ngokokwakhiwa kweRoma, kukho iindawo zokuhlala kunye neendawo zokuhamba. Iluncedo kubantu abathanda izakhiwo zembali ukuba bandwendwele eBelek. Ithiyetha yakudala, ebihlala ngexesha le-Hellenistic, ibaluleke kakhulu ebantwini abayithandayo imbali, kodwa nangona ingagcinwanga kakhulu namhlanje, ibalulekile ngokubonakalisa imiboniso yamaxesha akudala. Iya kuba lithuba elingenakuphepheka kwabo bathanda ukutyelela izixeko zembali kwaye bafuna ukuthatha iifoto ezininzi.
Ezi zinkolo zintathu ziphambili zihlala kunye kwaye zibumbane, zaze zabonakaliswa kweyona ndawo intle. Isitiya seNkolo, lelinye lamaziko oBhelek kwaye akhethwa kakhulu, yenye yeendawo ezithandwayo ngokudibanisa iinkolo ezintathu ezahlukeneyo. Onke ama-mosque amathathu, iicawe kunye nezakhiwo zesinagoge zikwigadi enye kwaye wonke umntu wenza imithandazo yawo ngokukhululekileyo kwindawo enye. Unokongeza iGadi yezeNkolo, apho kungekho mntu wahluliweyo kunye neenkcubeko zidityaniswa, apho kubhiyozelwa yonke imihla kunye neholide, phakathi kweendawo zakho eBelek. Ngokwenza uluhlu oluncinci, unokumakisha indawo ofuna ukuya kuyo kwaye ngenxa yoko awuyi kuphoswa yindawo.
Ithiyetha yeAspendos, enesakhiwo esingumlando esibaluleke kakhulu salo mmandla. I-Aspendos, eyindawo yemidlalo yeqonga enkulu xa kuthelekiswa namaxesha akudala ngenxa yokubaninzi kwabantu abayi-15.000, igcinwe kakuhle nangona ineminyaka engama-2000 imbali kwaye ifikelele kulo mhla ngemeko engazukutsala umdla wabatyeleli. Into yokuba isasetyenziswa yeyona nto ibalulekileyo kuyo. Ngesi sizathu, uninzi lwabakhenkethi beza kubona iindawo zembali.
Malunga neehotele zeAlanya
Ihotele eAlanya Antalya kakhulu iziko ababuki Turkey yenye ye abakhenkethi abaninzi bendawo amazwe abangenisa zezithili. Inomtsalane kubakhenkethi abaninzi basekhaya nabangaphandle ngohlobo lwayo oluhle, iihotele zokunethezeka, ulwandle, ubume bembali kunye neelwandle ezahlukeneyo. Umgama oya kumbindi wesixeko kukude kwiSikhululo seenqwelomoya iAntalya. ETurkey Europe yamkela abakhenkethi ezivela kulo lonke Alanya Inqaba Alanya Red Tower Alanya Museum unemilinganiselo ezininzi ezibalulekileyo ezifana Cleopatra Beach. Ilizwe liyaqhubeka nokwenza igalelo eliphambili kukhenketho. Ngeentengiso zehotele zakwa-Alanya, ungafikelela kumaxabiso akhoyo ngoku ngeVenkile yeholide yeVenkile kwaye unokufumana izibonelelo ezifanelekileyo kakhulu.
Ithuba lika-Alanya kwangoko
Ngaphandle kobume bayo obumangalisayo kunye nezikhumbuzo zembali, u-Alanya utsala umdla kunye neehotele zakhe eziphezulu zokugqibela kwaye utsala abantu minyaka le. Ukwamkela iindwendwe zayo ngomgangatho wayo ophezulu weenkonzo kunye neenkonzo zokuhlala ezifanelekileyo ezifumaneka kwicandelo lehotele i-Alanya, kuza ngaphambili. Unako kwakhona ukubhukisha kwi-intanethi malunga neehotele eziphambili zeAlanya kwaye ujongene nesiqinisekiso somgangatho. IAlanya yenye yezona ndawo zityebileyo nezonwabisa kakhulu kwiMeditera ngokweehotele. Ngombulelo kwithuba lokuqala, ungasebenzisa ithuba lokuhlala kwiihotele olubandakanya konke. Kuya kwanela ukwenza ukubhuka ngexesha lobusika.
I-Alanya Tourism City
Alanya yi Turkey lubalulekileyo kunye kunyaka ngamnye, amawaka abakhenkethi zithontelane kummandla phantse kuzo zonke iziphaluka kwelinye lamaziko kubakhenkethi kakhulu.
Nangona iAlanya yindawo etyebile kakhulu malunga nenkonzo yehotele, unokungayifumani indawo ngenxa yeemfuno ezinkulu kwiinyanga zasehlotyeni.
Nangona iihotele zakwa-Alanya zikwakhona, kuya kufuneka uhlawule imali eninzi. Kukwaluncedo ukwenza uphando oluyimfuneko ukuze uphonononge yonke indawo yeAlanya kwaye uxhamle kwiihotele.
Unokwenza ubhukisho olukhawulezayo nolula kwiihotele ezifanelekileyo zeAlanya ngokuvavanya izibonelelo kwihotele yaseAlanya yokubhukisha iindawo zokuqala. Ndiyabulela ngesiqinisekiso sexabiso elifanelekileyo, ungahlala kwiihotele ezisemgangathweni.
Ngenxa yokuba u-Alanya enesakhiwo esikhulu kakhulu kwaye sinembali, wonke umntu ofikayo unakekela inkqubo yokubhuka kakhulu ngaphambili.
Isithembiso sale xesha, isitima somqhubi
Kuyo yonke indawo Sasitshilo iMetro kuyo yonke iMetro siyaqhubeka (igalari yezithombe)
Kwiyiphi imitha yonke i-metro yengxaki
Indawo ethandwa kakhulu kwi-ski resort eMelika
'Ukumnandi' Ukuvula kwiMiboniso Yembali Yembonakaliso edumile
Ukuxubusha ukuzama ukubonisa ukuba kutheni iiSikethi zeCisco ziDume
Ikhefu lekhefu lokuNyaka omtsha
I-Speed ​​Speed ​​Train ijika Umzila kuLwandle oluMnyama naseMpuma
Isithuthi seendlela eziphakamileyo kwi-Kahramanmaraşa
Indlela entsha yeethente zeehotele zangaphandle i-3. moya
Icandelo likarhulumente kwindlela ephakamileyo zophuhliso lweeprojekthi
Indlela yokutshala imali yaseKalal Istanbul
Indlela yeholide eyaziwayo ngawo onke amaXesha
Afyonkarahisar Inqwelana yeCable Car Tender Okokugqibela
I-Babayiğit ifunwa ngeProjekthi yeCry yeKartepe yeKartepe
Ingxowa-mali yobutyebi ayikho kuluhlu lwethu lwe-Istanbul Investment Uluhlu
Isikhuphelo sombane esiqalisiweyo senkxaso yokuqokelela wonke umntu